Nea Ɛbɛboa Wo Ama Woanya Abotare | Mmoa a Wɔde Ma Abusua No
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Batak (Karo) Belize Kriol Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Mam Maya Mongolian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tojolabal Tswana Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba
Nea Ɛbɛboa Wo Ama Woanya Abotare
“Awarefo deɛ, daa obiara tumi yɛ biribi ma ɛsɔ ne yɔnko abotare hwɛ. Sɛ wonwaree a, wunhu sɛ abotare ho hia saa. Nanso, sɛ w’aware bɛkɔ yiye a, wuhia abotare.”—John.
Adɛn nti na wuhia abotare?
Wobɛyɛ dɛn akyerɛ sɛ wowɔ abotare?
“Abotare ho hia paa”
Sɛ woware a, ɛma wuhu wo kunu anaa wo yere mfomso paa.
“Sɛ moware na mframa fa mo ayeforo no so a, ɛyɛ mmerɛw sɛ wode w’adwene besi wo kunu anaa wo yere mfomso so. Sɛ wufi ase de w’adwene si wo kunu anaa wo yere mfomso so saa a, biribi kakraa bi a na wo bo afuw.”—Jessena.
Sɛ woannya abotare a, wobɛkasa a wonnwene ho.
“Biribi ba me mu a, seesei ara na maka, enti ɛtɔ da a, meka nsɛm bi a ɛnsɛ sɛ meka. Sɛ mewɔ abotare a, anka nneɛma bi wɔ hɔ a mɛdwene ho yiye ahu sɛ enhia sɛ meka.”—Carmen.
Bible ka sɛ: “Ɔdɔ wɔ abotare na ne yam ye.” (1 Korintofo 13:4) Nnipa mmienu a wɔdɔ wɔn ho deɛ, yɛhwɛ kwan sɛ obiara benya ne yɔnko ho abotare. Nanso, ɛnyɛ bere nyinaa na ɛba saa. John a yedii kan kaa ne ho asɛm no san kaa sɛ: “Abotare te sɛ suban pa foforo biara. Ɛyɛ mmerɛw sɛ wubenya, nanso ɛnkyɛ na asa. Egye mmɔdenbɔ na woanya abotare paa.”
Biribi a ɛyɛ den sɛ wubenya ho abotare si prɛko pɛ a, ebetumi asɔ w’abotare ahwɛ.
Nhwɛso: Sɛ wo kunu anaa wo yere ka asɛm bi a ɛyɛ yaw kyerɛ wo a, nea ɛbɛba wo mu ara ne sɛ wo nso ka bi kyerɛ no.
Bible mu afotusɛm: “Nyɛ ntɛm mfa abufuw, efisɛ nkwaseafo na wɔpere wɔn ho fa abufuw.”—Ɔsɛnkafo 7:9, ase hɔ asɛm.
Nea wobɛyɛ de akyerɛ sɛ wowɔ abotare: Twɛn kakra. Ansa na wo nso wobɛka biribi no, te ase sɛ biribi nti na wo kunu anaa wo yere kasaa saa, na ɛnyɛ sɛ wahyɛ da sɛ ɔreka asɛm no ama no ahaw wo. Nhoma bi a wɔato din Fighting for Your Marriage ka sɛ: “Yɛn mu dodow no ara, nea yɛn adwene yɛ yɛn sɛ yɛn kunu anaa yɛn yere kae no na ɛhyɛ yɛn abufuw, na ɛnyɛ asɛm a ɔkae anaa nea ɔyɛe no ankasa.”
Wo deɛ, yɛmfa no sɛ wo kunu anaa wo yere ahyɛ da sɛ ɔbɛhyɛ wo abufuw. Ɛno mpo, sɛ wunya abotare hyɛ wo ho so na woanka asɛm a ɛyɛ yaw biara ankyerɛ no a, ɛbɛma asɛm no atwa na asomdwoe aba. Bible ka sɛ: “Sɛ anyina nni hɔ a, ogya dum.”—Mmebusɛm 26:20.
“Sɛ wunya adwene sɛ wo yere yɛ wo tamfo a, to wo bo ase na kaakae nea ɛma wodɔ no. Afei, yɛ ntɛm yɛ biribi a ɛbɛma n’ani agye.”—Ethan.
Sɛ wo kunu anaa wo yere ka asɛm bi anaa ɔyɛ biribi ma ɛhaw wo a, dɛn na ɛyɛ a woyɛ?
Sɛ ɔyɛ saa bio a, wobɛyɛ dɛn anya ne ho abotare no bi aka ho?
Sɛ wo kunu anaa wo yere taa yɛ biribi de hyɛ wo abufuw a, dɛn na wobɛyɛ?
Nhwɛso: Da biara, wo kunu anaa wo yere ka akyi. Sɛ woretwɛn no na ɔmma a, ɛhyɛ wo abufuw paa.
Bible mu afotusɛm: ‘Monkɔ so nnya mo ho abotare na obiara mfa ne yɔnko bɔne nkyɛ no korakora.’—Kolosefo 3:13.
Nea wobɛyɛ de akyerɛ sɛ wowɔ abotare: Ma w’aware ho nhia wo nsen nea wo ankasa wuhia. Bisa wo ho sɛ, ‘Sɛ mema me bo fuw a, ɛbɛboa yɛn aware no anaa ɛbɛsɛe no?’ Afei nso kae sɛ, “yɛn nyinaa di mfomso mpɛn pii.” (Yakobo 3:2) Wei kyerɛ sɛ, wo nso nneɛma bi wɔ wo ho a ɛnkɔ yiye a ehia sɛ woyɛ ho adwuma.
“Ɛtɔ da a, mitumi nya m’adamfo ho abotare sen me kunu. Misusuw sɛ nea ɛma ɛba saa ne sɛ, me ne me kunu bɔ paa. Enti ɛma mihu ne mfomso. Nanso, sɛ minya me kunu ho abotare a, ɛkyerɛ sɛ medɔ no na mibu no. Ehia sɛ minya saa suban yi wɔ m’aware mu.”—Nia.
Sɛ wo kunu anaa wo yere di mfomso a, ɛyɛ a wunya ne ho abotare?
Dɛn na wobɛyɛ na da foforo woatumi anya ne ho abotare no bi aka ho?
“Sɛ aware bɛsɔ a, ehia paa sɛ awarefo no nya abotare. Nnipa mmienu a mfomso wɔ wɔn ho a wɔaware deɛ, ɛyɛ dɛn ara a, nsɛmnsɛm bɛba. Ɛtɔ da mpo a, nneɛma bi a aka baako hɔ betumi ayɛ baako ahi. Sɛ yɛannya abotare a, saa nneɛma yi betumi ayɛ sɛ mfɔte anaa nkanka, na adidi aware no ase asɛe no.”—Jessena ne ne kunu Hayden.
Yɛbɔ No Mua A: Nea Ɛbɛboa Wo Ama Woanya Abotare Wɔ W’aware Mu
Biribi a ɛyɛ den sɛ wubenya ho abotare si prɛko pɛ a, ebetumi asɔ w’abotare ahwɛ
Ansa na wo nso wobɛka biribi no, kae sɛ wo kunu anaa wo yere anhyɛ da sɛ ɔreka biribi ama no ahaw wo.
Ma w’aware ho nhia wo nsen nea wo ankasa wuhia. Kae sɛ, wo nso nneɛma bi wɔ wo ho a ɛnkɔ yiye a ehia sɛ woyɛ ho adwuma.
Aware deɛ, anigye bɛba mu a, gye sɛ obiara bu ne yɔnko. Ɛno deɛ obiara ntumi nyɛ ho hwee. Dɛn na wobɛyɛ ama wo kunu anaa wo yere ahu sɛ wubu no?
Share Share Nea Ɛbɛboa Wo Ama Woanya Abotare
ijwhf asɛm 8
Suban Bi a Ɛwɔ Wo Kunu Anaa Wo Yere Ho a Ɛyɛ Wo Ahometew No, Nya Ho Adwempa